Dr. Tint Swe's Writings: Questions မေးခွန်းတွေ
၁။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ အာနိသင်က အချိန်ဘယ်လောက်အထိ ကာကွယ်သလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဆရာ
ခဏခဏ တင်ထားပြီး။ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
၂။ ဆရာခင်ဗျာ မေးခွန်းရိုင်းသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Ultrasound ရိုက်ရင် ကိုယ်ဝန် အနည်းဆုံး ဘယ်နှလရှိမှ Ultrasound မှာ ပေါ်န်ုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေရင် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်ဖြေပေးပါအုံး ဆရာ
၃။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ အသက်က ၂၅ ဖြစ်တာက ၁နစ်ကျော်ပါပြီ နာခေါင်းကဖြစ်တာပါ လွန်ခဲ့တဲ့ တနစ်ကျော်လောက်ထဲက နာခေါင်းကခဏခဏပိတ်တယ် တခါတလေ အသက်ရှူကြပ်လောက်အောင်ပိတ်တယ် ဆေးခန်းပြတယ်ပြီးရင် ခဏလောက်သက်သာသွားတယ် နောက်ပိုင်းပြန်ပြန်ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ အရမ်းအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လလောက်စပြီးပိုဆိုးလာတယ် သတိထားမိတာကအဲကွန်းလေခံရင်ဖြစ်တာပဲဆရာ အဲကွန်းခံပြီးရင် နှာခေါင်းက တဖက်ကနှာသီးစရောင်တယ် ပြီးရင် အသက်ရှူကြပ်ပြီးကျန်တဲ့တဖက်ပါထပ်ရောင်လာတယ် နောက်ပိုင်း ဆေးသောက်လို့သက်သာလဲတဖက်ပဲဆရာ ကျန်တဖက်ကနှာသီးကအမြဲလိုလိုရောင်နေတယ် တခါတလေ သွေးစလေးတွေပါတတ်တယ် ပြီးတော့ အဲ့လိုအဲကွန်းခံပြီးနှာခေါင်းစပိတ်တာနဲ့ အလိုလိုအိပ်ချင်လာတယ် ခေါင်းတွေအုံလာတယ်ဘာအလုပ်မှမလုပ်ချင်တော့အောင် ဖြစ်တာ ဆရာ အာရုံကြောနဲ့လဲဆိုင်မလားသိချင်လို့ပါ နှင်းဆီကုန်း ဆေးရုံမှာပြဖူးတယ်ဘဆရာ အဲ့ဆေးသောက်ပြီးခဏသက်သာတယ် ခုပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆရာ သူတို့ကမသက်သာရင် ပြန်လာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ပေးမယ်တဲ့ အဲ့တာပြန်သွားရမလားဆရာ ဒါမှမဟုတ် အာရုံကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာပဲသွားပြရမလားဆရာ
Rhinitis နှာခေါင်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/rhinitis.html
Allergic Rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergic-rhinitis.html
၄။ မင်္ဂလာပါ Doctor ကာလသားအကြောင်းလည်းမေးချင်လိုပါ
Syphilis စာတွေ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
၅။ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အသက် ၁၈နှစ် ပါးပေါ်မှာပွေးပေါက်လို့ Triamcinolone acetonide cream လိမ်းလိုက်တာ မျက်နှာ၁ခုလုံးရောင်သွားတယ် ဆေးခန်းပြတော့လည်းမသက်သာဘူး ဘယ်လိုဆေးမျိုးသောက်သုံးသင့်လည်းခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ
၆။ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်သမီးလေးကအသက်တနှစ်တလရှိပါပြီ သမီးကဒီဇင်ဘာလကစပြီး တလတခါလောက် ချောင်းဆိုးနှာစေးဖြစ်နေပါတယ် ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်းတက်မလာပါဘူးဆရာ ပုံမှန်တော့စားပါတယ်ခင်ဗျ တီဗီလက္ခဏာတွေသိချင်လို့ပါဆရာ စိုးရိမ်ရလားဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျ
Common Cold in Children ကလေးတွေ အအေးမိရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
Primary Complex ကလေးတီဘီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/primary-complex.html
၇။ ဆရာ ကျွန်တော်ကလေးမရသေးလို့ပါ အိမ်ထောင်ကျတာ2နှစ်ပြည့်တောပါမယ် ဆေးစစ်တော့လည်း 2ယောက်စလုံး ကောင်းတယ်တဲ့ဆရာ ကျွန်တော်အားဆေးကဘာဆေးများသောက်ရမလဲဆရာ သားသမိးလိုချင်ခိုပါဆရာ ကျွန်တော် အားဆေးကောင်းတာလေးညွန်ပြပေးပါလားဆရာ
To get pregnant စာ ခဏခဏ (ခဏခဏ) တင်ထားပြီး။ ဘလော့မှာ ဖတ်ပါရန်။
နေ့တိုင်း ၃-၄ ယောက်ကိုဖြေနေရတယ်။ ဖွင့်တဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ဖေါင့် သို့မဟုတ် နည်းပညာတခုခု လိုအပ်နေတာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်က မတတ်နိုင်။ ဘလော့ကို စာဖတ်တဲ့အကြိမ်ပေါင်း ၃ သန်းကျော်ရှိတယ်။
၉။ ဆရာခင်ဗျာ့ Link ထဲဝင်ဖတ်တာ စာတွေက ဖတ်လို့အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ
Tint Swe နေ့တိုင်းပြန်ရေးပြနေရ။ ဖွင့်တဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာလိုအပ်ချက်ဖြစ်။
Zayar Naymin Copy ယူပြီး ဖုန်းထဲက note မှာ paste လုပ်ပြီးဖတ်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။😊😊😊
• Thu Zar အသက်၂၆ ရှိပါပြီ ဝမ်းပိုက်အပေါ်ပိုင်း အလုံးကြီးပုံစံရှိပြီး နာနေတာ၃ရက်ရှိပြီ။ အသက်ပြင်းပြင်ရှုလည်း မရပါ ဝမ်းချုပ်ပြီးလေမလည်ပါ မည့်အစာမှစားလို့မရပါ စားရင်အဝါရည်တွေအန်ပါသ် မည့်အစာမှစားလို့မရပါ စားရင်အဝါရည်တွေအန်ပါသည် မည်သည့်သောက်သုံးရန်သင်တော်မလဲဆရာ။
• Thu Zar မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင့်ကျွန်မကမက်ဆင်ခ်ျမသုံးတက်လိုီ့နေရာကနေမေရတာခွင့်လွတ်ပါကျေဇူးပြုပြီးပြေပေးပါနော်
• Dr. Tint Swe မေးနည်းစည်းကမ်းမှာ မေးစရာနေရာ ၃ ခုပေးထား။
• Thu Zar Hiv ပိုးBပိုးCပိုးရှီသူသုံးတဲ့ဆေးထိုးအပ်မှပိုးတွေကဘယ်အချိန်ထိအသက်ရှင်နိူင်လဲဆေးအပ်ထဲမှာရောသွေးတွေကဘယ်အချိန်ထိအောင်စိုနေနိူင်လဲသိချင်ပါတယ်ရှင့်
• Thu Zar ဆရာကြီးမင်္ဂပါလာပါရှင့်
• Dr. Tint Swe ကွန်မင့်မှာ မေးတာ မဖြေပါ။ ဆောရီး။ မေးနည်းစည်းကမ်းကို တနေ့မှာ ၃ ခါမကတင်နေတယ်။
• Thu Zar Hiv ပိုးBပိုးCပိုးရှီသူသုံးခဲ့ဆေးအပ်တွေမှာပ်ိုးတွေကဘယ်ချိန်ထိအသက်ရှင်နိူင်လဲဆေးအပ်ပင်ထဲမှာရောသွေးကဘယ်အချိန်ထိအောင်စိုနေနိူင်လဲရှင့်
• လပြည့် ဝန်း ဆရာကြီးရဲ cover phto မှာ ဖတ်ကြည်ပါ အဲ့မှာမေးမှဖြေပေးတာပါ firend post တွေမှာလည် blog နဲ့တွဲတင်ပါတယ် နှိပ်ရင် blog ထဲရောက်ပါတယ်ရှင် comment မှာမမေးပါနဲ ဆရာကျန်းမာရေး အမြဲဖတ်နေသူမို့ အကြံပေးတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
• Dr. Tint Swe လပြည့် ဝန်း ကျေးဇူး။
Omega-3 ဒိထက်တော့ မတတ်နိုင်
Omega3အကြောင်း ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါဆရာ Omega3က Heart disease ကို ကာကွယ်ပေးတာလား ကုသပေးတာလား ပုံမှန်ကျန်းမာသူတွေကရော omega3ကို နေ့စဉ်သောက်သုံးသင့်ပါသလား ဆရာ တခါမှ မမေးဘူးလို့ စည်းကမ်းချက်တွေရှိရင်လဲ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ
အိုမီဂါသရီးအကြောင်း ခဏခဏ (ခဏခဏ) တင်ထားပြီး။ မေးနည်းစည်းကမ်းအရ မမေးလိုသူများ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်ကြ။ မေးနည်းစည်းကမ်းကိုလည်း တနေ့မှာ ၃ ခါမကတင်နေရ။ ဒိထက်တော့ မတတ်နိုင်။
1. Obimin and Omega-3 (အိုဗီမင်) နဲ့ (အိုမီဂါ သရီး) https://doctortintswe.blogspot.com/…/obimin-and-omega-3.html
3. Omega-3 and Pregnancy အိုမီဂါ နှင့် ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/…/omega-3-and-pregnancy.…
မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၇နှစ်ပါဆရာ။ ပထမကလေးကို မွေးတုန်းက ၃၉ပတ်မှာရေမြွာအရင်ပေါက်ပြီး သားအိမ် 1cm ပဲပွင့်လို့ ခွဲမွေးခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်အတောတွင်း မိခင်ကျန်းမာရေးလည်းအကုန်ကောင်း ကလေး အနေထားလည်းမှန်ပါတယ်ဆရာ။ ကလေးထပ်ယူချင်ပါတယ် နှစ်နှစ်ခြားယူရင် ရိုးရိုးပြန်မွေးလို့ ရနိုင်မလားဆရာ။ သားလေးမမွေးမှာ စိုးရိမ်လို့ပါဆရာ။ ပထမကလေးက မိန်းကလေးပါ။ ဗိုက်ခွဲမွေးရင် သုံးယောက်ထိပဲခွဲလို့ရတာလားဆရာ။ အခုလေးယောက်ထိခွဲမွေးကြတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒုတိယကလေးကို ရိုးရိုးပြန်မွေးချင်ပါတယ် အချိန်ဘယ်လောက် ခြားပြီး ထပ်ယူမှ အဆင်ပြေနိုင်မလဲ ကျေးစူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။ အစဉ်မြဲ ရိုသေလေးစားလျက်ပါ ဆရာရှင့်။
1. Normal labor after LSCS ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးနောက် ရိုးရိုးမွေးလို့ရသလား https://doctortintswe.blogspot.com/…/vaginal-birth-after-ce…
2. Baby Boy or Girl ကလေးမွေးရင် ယောက်ျားလေးရချင်သလား https://doctortintswe.blogspot.com/…/…/baby-boy-or-girl.html